ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်သည့် ၁၁ ဦးပါ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်း | Panpyoelat
Home News ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်သည့် ၁၁ ဦးပါ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်း
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်သည့် ၁၁ ဦးပါ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်း
(FILES) In this file photo taken on July 19, 2018, Myanmar's Chief Senior General Min Aung Hlaing, commander-in-chief of the Myanmar armed forces, arrives to pay his respects to Myanmar independence hero General Aung San and eight others assassinated in 1947, duringaceremony to mark the 71th anniversary of Martyrs' Day in Yangon. - Myanmar's military seized power inabloodless coup on February 1, 2021, detaining democratically elected leader Aung San Suu Kyi as it imposedaone-year state of emergency. (Photo by Ye Aung THU / AFP)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ၁၁ ဦးပါ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် ညပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက ဒုဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေးက အတွင်းရေးမှူး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦးက တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်းတို့ အပြင် တပ်မတော် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်၊ ဦးသိန်းညွန့်နဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
Previous articleစစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ရန်ကုန်လူထု သံပုံးတီး၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်